3PCS အနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်နူးညံ့သောကလေးအ ၀ တ်အစားစာအုပ်များ - အခမဲ့ပို့ဆောင်ခြင်းနှင့်အကောက်ခွန်မရှိပါ WoopShop®
3PCS အနက်နှင့်အဖြူရောင်နူးညံ့သောကလေးအ ၀ တ်အစားစာအုပ်များ
မှစ. သင်္ဘောများ စပိန် တရုတ်နိုင်ငံ
စပိန် / အဝါရောင် တရုတ် / အဝါရောင်
3PCS အနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်နူးညံ့သောကလေးအ ၀ တ်အစားစာအုပ်များ - စပိန် / အဝါရောင် backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
အသက်အရွယ် Range: ၀-၁၂ လ၊0-12 လ
အင်္ဂါရပ်များ: ပျော့ပျောင်းသော ကျပ်တေးဂီတ
ရှုထောင့်: 20 * 12cm
ဆောင်ပုဒ်: ယာဉ်၊ နံပါတ်၊ တိရိစ္ဆာန်
feature ကို: ကာစရာကုလားကာ၊ တွန်းလှည်းအဝတ်အစားစာအုပ်၊ အသံစာရွက်၊ အတွင်းပိုင်းအသံ လက်သိုင်းကြိုး, Baby flipbook သီးသန့်အရွယ်အစား
အဘို့အဝတ်စုံကို: ကလေးစာအုပ်0င် 12 လ
ကလေးတစ်လအရွယ်တွင်မျက်စိသည် ၃၀ စင်တီမီတာသာရှိသည်။ ၃ လအကြာတွင်အမြင်အာရုံအကွာအဝေးမှာတဖြည်းဖြည်းတိုးလာသည်။ ကျွမ်းကျင်သူတွေကကလေးငယ်ရဲ့အမြင်ကိုလှုံ့ဆော်ပေးနိုင်တဲ့အဖြူရောင်နဲ့အဖြူရောင်ဆန့်ကျင်ဘက်ပုံရိပ်ကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။
ကလေး၏အမြင်အာရုံဆိုင်ရာသိမြင်မှုဖြစ်စဉ်၏ရွှေရောင်ကာလကိုခြေလှမ်းစလှမ်းလိုက်ပြီး ဦး နှောက်ကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည်။
အက္ခရာများ၊ နံပါတ်များ၊ ဂျီသြမေတြီ၊ တိရိစ္ဆာန်များ၊ သစ်သီးဝလံများစသဖြင့်၊
ဂရပ်ဖစ်ကြွယ်ဝမှု၊ စာအုပ်တိုင်းတွင်စာမျက်နှာ ၂၀ ပါရှိသည်
အတွင်းပိုင်းတွင်အသံချဲ့စက်၊ လက်ပတ်ကြိုးဒီဇိုင်း၊ အချိန်မရွေး၊ နေရာမရွေးချိတ်ဆွဲထားသည်
အလွန်ကောင်းသောအရည်အသွေး, အနံ့မရှိ, အမိန့် ~ 3weeks နော်ဝေသို့ရောက်လေပြီ။ အကြံပြုပါသည်။
отличноекачество။ некоторыестраницышуршат။ внекоторыхпищалки။ ребенокдоволен။ запаханет။
Parfait je suis conquise ။ မိဘများအနေဖြင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များအားဆေးလိပ်သောက်ရန်အကြံပေးသည်။ သူတို့တွေဟာပန်းချီကားတွေ၊ သစ်သီးများကိုသစ်သီးဖျော်ရည်များပေါ်၌ထည့်ထားသောအသီးများ၊ ဒီစာမျက်နှာကကလေးငယ်တွေအတွက်အလွန်အရေးကြီးတဲ့စာမျက်နှာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ Je suis assistante maternelle et ravi de ses3livres ။ Merci au vendeur ။
Отличнаяигрушка။ Сделанакачественно။ Будетинтереснадлядеток။ Instagram - yusupchik_k ၏သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဓာတ်ပုံများ
kliczne książeczki, pięknie wykonane, စူပါ !! polecam sprzedawcę